बुटवलका युवा इन्जिनियर शिशिरले बनाए पानीबाट गाडी चलाउने उपकरण ! – नेपाली सूर्य
September 11, 2019 Nepali SuryaLeaveaComment on बुटवलका युवा इन्जिनियर शिशिरले बनाए पानीबाट गाडी चलाउने उपकरण !
बुटवल : पानीबाट गाडी चल्छ भन्दा जो कोहीलाई अचम्म लाग्ला। तर, नेपालमा यो सम्भव भएको छ। यहाँका एक युवा इन्जिनियरले पानीबाट गाडी चलाउने उपकरण तयार परेका छन्। जसलाई जुनसुकै गाडी तथा मोटरसाइकलमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।बुटवल मिलन चोक निवासी एक युवाले ईन्धन बचत तथा वातावरणमैत्री उपकरणको आविष्कार गरेका छन ।भारतको बैंगलोरबाट मेकानिकल इन्जिनियररिङ गरेका उनले साना गाडी र मोटरसाइकलमा प्रयोग गर्न सकिने डिभाइस बनाएका हुन्। युवा प्रतिभा तथा ईन्जिनियर शिशिर जिसीले सवारी साधनमा जडान गर्ने विशेष किसिमको यन्त्र आविष्कार गरेका हुन ।
प्याज खाने बानी छ ? फाइदाबारे पनि जानीराख्नुस्
आगलागीबाट ५० लाख रुपैयाँ बराबरको धनमाल जलेर नष्ट
के तपाईको हातमा रौँ छ ? हातमा रौँ पुरुष र महिला मध्य कसलाई शुभ ?